Weriye shaqadeeda ku weyday su`aal ay weydiisay madaxweyne Putin | Xaysimo
Home War Weriye shaqadeeda ku weyday su`aal ay weydiisay madaxweyne Putin
Weriye shaqadeeda ku weyday su`aal ay weydiisay madaxweyne Putin
“Barasaabkeenna, Dmitry Artkyukhov, wax dadaal ah kuma bixiyo inuu ka dhabeeyo dhismaha buundada,” ayay tiri Yarovskaya. “Welina arrintan inta badan lagama hadlo xitaa heer federaal. Sidaas daraaddeed waxay su`aashu tahay ma heli karnaa inuu federaalku soo fara geliyo?”
“Ma arko isqurxinta macmalka ah. wuxuu u muuqdaa da`iida,” ayaa la sheegay inay tiri. Arrintaasi lama xaqiijin karo maaddaama qoraalkaasi laga saaray markii dambe.
Afhayeenka Putin ayaa sheegay in sababta ay weriyaha shaqada uga tagtay aan la ogeyn – in ay is casishay iyo in shaqada la tirayba, sida ay shaacisay barta Izvestia. Si kastaba, in shaqada laga tiro waa mid u taalla tifaftirayaasha telefishinka.